Iikholeji nezikolo eziphakamileyo zinesigama esingaqhelekanga. Njengokuba isobho se-alfabhethi samagama asemfundo ayenganele, kukho konke okungaqhelekanga-ibhasari, umzekelo, isivuno kunye neJan Term. Ngoko xa umcebisi wengane wakho ebhekisela kuye ngokuthi "okhulayo," oko kuthetha ntoni emhlabeni?
Ngesinye isikhathi, inkwenkwe yayisemncinci kuze kube nguJuni ngonyaka wakhe omncinane. Xa intsimbi ibhala ngomhla wokugqibela wesikolo, waba ngumntu ophezulu-nangona ukuqala komnyaka olandelayo wezemfundo kwakusekho inyanga ezimbini.
Ngoku, ubizwa ngokuba ngumntu okhulayo. (Ngokucacileyo, yinto nje yexesha elide ngaphambi kokuba abantwana bezemfundo bafunde ukubizwa ngokuba ngabafundi bebeleta!)
Eli gama lisetyenziswe ngokusisiseko kwiikholeji eziphakamileyo zase-United States kwaye xa iikholeji zixoxa ngethuba lokungeniswa kwexesha, njengoko kuthi, "Sinikela ngokutyelela ebusuku ukunyuka kwabantu abadala." Iikholeji aziqhelanga ukusetyenziswa ngekota ukuba zixoxisane nabafundi babo, kwaye ngokwenene, i-terminology esandul 'ukutshabalalisa / i-sophomore / i-junior / isigama esiphezulu sikhula ngokubhekiselele ekuchazeni ezinye iinkcukacha ngokusekelwe kwithuba elingakanani umfundi, "njengomnyaka wokuqala," "unyaka wesibini " kwaye nangokunjalo.
Indlela Abaphakamileyo Abaphakamileyo kufuneka Baphathe ixesha labo
Ukunyuka kwakho okuphezulu kusekhaya eliphakamileyo kwisikolo esiphakamileyo, ngethuba lasehlotyeni mhlawumbi ufuna ukuxhoma kunye nabahlobo, ukulala, ukubhukuda, ukudlala imidlalo yevidiyo, ukuthatha uhambo okanye indlela yokulala ngaphandle kokungenzi nto. Xa sele efumene loo nkqubo, kubalulekile ukuzinikela iiyure ezimbini okanye ezintathu ngeveki ukuqala kwizicelo zekholeji.
Unokukuphazamisa ukuba eli lixesha lakhe, kodwa abafundi abaqala inkqubo yokwamkelwa ngethuba lehlobo ngaphambi kokuba abaneminyaka yabo ephezulu baphumelele. Nazi izinto ezine zokubeka uluhlu lokukwenza:
Yakha uluhlu lwekholeji: Ukuchonga apho ungayifaka khona ibalulekileyo ebalulekileyo ukuthatha ihlobo. Mbonise apho uza kufumana ulwazi lwakho ukugqiba ukuba yiyiphi ikholeji efanelekileyo kumntwana wakho.
Qala uqale ukukhangela kwi-financial aid ongayifumana.
Qhagamshelana nala ma kholeji: Abaposisi kwiSizwe soMbutho weeKholeji zokuNgeniswa kweeKholeji zathi iikholeji zokungeniswa kwamakholeji zijikezela abanye abafundi abaqeqeshiweyo ngaphandle kwesizathu esinye kunokuba abafundi abazange baqhagamshelane nabo ngaphambi kokuba bangenise izicelo zabo. Ukuphakama kwakho okuphezulu kufuna ukubonisa "inzala" - igama elisetyenziswe iikholeji ukuphawula imvama kunye nomgangatho wabafundi abanxibelelwano abanee-ofisi zokumkelwa ezibonisa ukuba kunokwenzeka ukuba umfundi angabhaliswa ukuba angeniswa. Nantsi indlela yokugxila kule nkqubo:
Bhalisela uluhlu lweposi lokuthumela iikholeji kwiwebhusayithi yayo.
Fumana amagama kunye ne-imeyile yabameli abamkelweyo abelwe kwisikolo sakho esiphakamileyo kwaye baqhagamshelane nabo ukuze ulandele umdla wakho.
Ukutyelela iikholeji kwaye ulungiselele udliwano-ndlebe.
Yiya kwiikholeji zendawo zekholeji ukudibana kunye nokuthetha kwiikholeji zekholeji ebusweni.
Qala ekuqaleni kwezicelo kunye nemibuzo yesincoko: Ukuzalisa izicelo zakho zeekholeji kuyincandelo ebalulekileyo yenkqubo kunye nokujongana nesincoko esinoyikiyo kunokuba nzima. Ukunyuka kwabantu abadala kufuneka bazalise ubuncinane isicelo esisodwa ngaphambi kokuba isikolo siqale.
Oku kuya kunceda ukutshabalalisa inkqubo ukwenzela ukuba abafundi abaphumelelayo banokusingatha ngokuzithemba izicelo ngexesha lonyaka.
Biography kaLenny Bruce
AmaKristu, amaPagane, okanye iImpembelelo zeHalloween
Ngaphandle kweMigaqo ye-Octet
Iimoya ezibonakalisa ngesiSpanish ezisetyenziselwa ukuchaza izinto
Ukwenza isiCwangciso sokuCamngca komhlaba
Intaba yaseVinson: Intaba ephezulu kunazo zonke eAntarctica
Iilwimi zaseSpeyin azikho phantsi kweSpeyin